I-China Vietnam- Insiza Nezivivinyo ze-MIC | I-MCM
I-India - CRS
ENyakatho Melika- CTIA
Melika, Canada- cTUVus & ETL
Isitifiketi se-ietVietnam MIC
ISetyhula 42/2016 / TT-BTTTT ibeke ukuthi amabhethri afakwe kumaselula, amathebulethi nezincwadi zokubhalela akuvumelekile ukuthunyelwa eVietnam ngaphandle kokuthi anikezwe isitifiketi se-DoC kusukela ngo-Okthoba 1, 2016. IDoC kuzodingeka futhi ukuthi ihlinzeke lapho ifaka isicelo Sokugunyazwa Kohlobo lwemikhiqizo yokuphela (omakhalekhukhwini, amaphilisi kanye nezincwadi zokubhalela).
I-MIC ikhiphe iSekhula 04/2018 / TT-BTTTT entsha ngoMeyi, 2018 ebeka ukuthi awusekho umbiko we-IEC 62133: 2012 okhishwe ilabhorethri egunyazwe phesheya owamukelwa ngoJulayi 1, 2018. Ukuhlolwa kwendawo kuyadingeka ngenkathi ufaka isicelo sesitifiketi se-ADoC.
I-QCVN101: 2016 / BTTTT （bhekisa ku-IEC 62133 ： 2012)
Uhulumeni waseVietnam ukhiphe isimemezelo esisha esinguNombolo 74/2018 / ND-CP ngoMeyi 15, 2018 sokubeka ukuthi izinhlobo ezimbili zemikhiqizo engeniswe eVietnam zingaphansi kwesicelo sePQIR (Product Quality Inspection Registration) lapho singeniswa eVietnam.
Ngokuya ngalo mthetho, uMnyango Wezokwaziswa Nokuxhumana (MIC) waseVietnam wakhipha idokhumende elisemthethweni i-2305 / BTTTT-CVT ngoJulayi 1, 2018, elisho ukuthi imikhiqizo engaphansi kwayo (kufaka phakathi amabhethri) kumele isetshenziselwe i-PQIR lapho ingeniswa ungene eVietnam. I-SDoC izohanjiswa ukuqedela inqubo yokususwa kwamasiko. Usuku olusemthethweni lokuqala ukusebenza kwalo mthetho ngu-Agasti 10, 2018. I-PQIR isebenza kokungenisa okukodwa eVietnam, okusho ukuthi, ngaso sonke isikhathi lapho umuntu engenisa impahla engenisa impahla ezweni, uzofaka isicelo sePQIR (ukuhlolwa kweqoqo) + SDoC.
Kodwa-ke, kubangenisi abaphuthuma ukungenisa izimpahla ngaphandle kwe-SDOC, i-VNTA izoqinisekisa i-PQIR okwesikhashana futhi ivumele ukuvunyelwa kwamasiko. Kepha abangenisi bezimpahla kumele bahambise i-SDoC ku-VNTA ukuqedela yonke inqubo yokuvunyelwa kwamasiko zingakapheli izinsuku eziyi-15 zokusebenza ngemuva kokuvunyelwa kwamasiko. (I-VNTA ngeke isakhipha i-ADOC edlule esebenza kuphela kubakhiqizi bendawo baseVietnam)
● Umhlanganyeli Wokwaziswa Kwamuva
I-MCM ixhumana kakhulu neMIC eyabelana ngezindaba zakamuva zokuqinisekiswa kweVietnam.
● Umsunguli welebhu yokuhlola ibhethri nohulumeni wasekhaya
Ilebhu yokuhlola ibhethri yasungulwa ngo-2017 nguhulumeni waseVietnam kanye ne-MCM, okuwukuphela kwelabhoratri yendawo enesiqu esiphelele se-QCVN101: 2016. Futhi-ke iMCM iba yi-ejenti kuphela yale lab eMainland China, Hong Kong, Macau naseTaiwan.
● Isiphakamiso sokuqinisekiswa okuyimpoqo kwe-Vietnam kwemikhiqizo yebhethri
Ilebhu esungulwe yi-MCM ibhekele ukuhlolwa komkhiqizo nokuqinisekiswa ngenkathi i-MIC ibophezelekile ngokukhipha umthethonqubo osemthethweni wokuqinisekisa kanye nomthetho. Imizimba emibili ibambisene ngokubambisana ukukhuthaza ukuthuthukiswa kokuhlolwa kwebhethri kanye nesitifiketi eVietnam.
● Isevisi ye-Agency eyodwa
I-MCM, i-ejensi ekahle yokuma, inikeza ukuhlolwa, ukunikezwa isitifiketi kanye nensizakalo ye-ejenti kumakhasimende.
Langaphambilini I-India - CRS
Olandelayo: IMalaysia- SIRIM
Ibhethri Vietnam Mic
Ibhethri Vietnam Pqir
Inani Lesitifiketi SaseVietnam
Inqubo Yesitifiketi seVietnam
Isevisi Yezitifiketi yaseVietnam
Isitifiketi seVietnam Mic
Intengo Yezitifiketi zeVietnam Mic
Inqubo Yezitifiketi zeVietnam Mic
IVietnam Mic Certification Service
Isikhathi se-Vietnam Mic Lead
IVote Mic Quotation
IVietnam Mic Umbiko
Isidingo seVietnam Mic
Ukucaciswa kweVietnam Mic
Imibhalo Yezobuchwepheshe yaseVietnam Mic
Isidingo Sezobuchwepheshe seVietnam Mic
Ukuhlolwa kweVietnam Mic
Izinto Zokuhlola zeVietnam Mic
Indlela Yokuhlola yeVietnam Mic
Umbiko Wokuhlolwa Kwe-Vietnam Mic
I-Vietnam Mic Yokuhlola Lab
I-Laboratory Yokuhlola I-Vietnam Mic
Intengo Yokuhlola yeVietnam Mic
Isevisi Yokuhlola I-Vietnam Mic
Isikhathi sokuhlola i-Vietnam Mic
IVietnam Mic Tr
Intengo Yokuhlola yaseVietnam
Isevisi Yokuhlola iVietnam
Ikheli: 1 / F Road No.13, Shiguang Road, Panyu District, Guangzhou, China